Phaseolin ntụ ntụ (13401-40-6) hplc ma98% | AASraw Fat Loss ntụ ntụ
/ ngwaahịa / Ọla abụba / Phaseolin ntụ ntụ
SKU: 13401-40-6. Category: Ọla abụba
AASraw nwere njikọ na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke Phaseolin ntụ ntụ (13401-40-6), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Phaseolin ntụ ntụ bụ mkpụmkpụ glycoprotein nke na-agbakọta n'ime ihe nchekwa nchekwa protein nke anụ ahụ nkịtị (Phaseolus vulgaris L.). Iguzogide mbibi nke proteolytic yiri ka ọ ga-abụ akụkụ dị mkpa nke na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ n'ime ihe ndị dị na nchekwa nchekwa protein.
Vidio nke Phaseolin
Raw Phaseolin ntụ ntụ bụ isi Characters
aha: Phaseolin ntụ ntụ
Molekụla Formula: C20H18O4
Ọbara arọ: 322.358
Raw Phaseolin ntụ ntụ na-efu ọnwụ okirikiri
Phaseolin ntụ ntụ (CAS 13401-40-6)
Raw Phaseolin ntụ ntụ Usage
Phaseolin ntụ ntụ bụ mkpụmkpụ glycoprotein nke na-agbakọta n'ime ihe nchekwa protein nke anụ ahụ nkịtị (Phaseolus vulgaris L.). Iguzogide mmebi iwu nke proteolytic nwere ike ịbụ akụkụ dị mkpa nke nwaazụ Phaseolin raw ntụ ntụ, na-ekwe ka ụlọ ya na-arụ ọrụ n'ime nchekwa ihe nchekwa protein. Inweta nke a na-eguzogide protease na-ejikọta na nzukọ nke Phaseolin ntụ ntụ na-agbanye n'ime trimers, usoro ngwa ngwa na nke ọma nke na-ewere ọnọdụ na reticulum endoplasmic. Na mkpụrụ ndụ mkpụrụ akụkụ nke mkpụrụ ndụ Phaseolin raw powder trimerization nwere ike inyere aka site na ihe cellular na-eme nakwa na ọnụnọ nke ndị inhibitors nke N-njikọ glycosylation. Usoro nke ejikọrọ njide nke akụkụ ndị ọzọ na ndị na-eme mgbakọ na mpaghara nke ụzọ nzuzo ahụ ga-ekwenye na ọ bụ nanị protein nke na-eguzogide ọgwụ protein ka a na-ebute na nchekwa ihe nchekwa, na-enye aka na arụmọrụ zuru oke nke ịchọta protein protein.
Ịdọ aka ná ntị na obere phaseolin ntụ ntụ
N'uzo di iche, ike ndi na-egbochi enzyme na-ebelata ọnụ ọgụgụ nke calorie dabeere na carbohydrate nke na-etinye uche ma gbanwee ghọọ abụba. Enweghi ike ịkụda ụda nri n'ime ihe ndị dị mfe karị, usoro nchịkọta nri na-ekpochapụ ihe ndị na-emekarị ka ọ bụrụ na a na-emepụta ya n'oge ikuku obi. Nnyocha e mere na Mahadum California mere ka phaseolamin gbochie ma ọ bụ kwụsị oge mgbaze nke nri ndị dị mgbagwoju anya, si otú a na-ebelata ibu dị elu na ọnụ ọgụgụ ndị buru ibu. Ọ bụ ezie na ụfọdụ na-egbochi ndị ogbochi dịka orlistat (aha niile aha niile) na-emepụta ihe na-adịghị mma na-egbuke egbuke n'ihi arụmọrụ ha na-eme ka enzyme rụọ ọrụ, ọtụtụ nsogbu a na-agwọ ọrịa egosipụtawo ọkpụkpụ afọ ọsịsa na afo mgbu n'etiti ndị ọrụ phaseolamin.
Mbelata ndepụta Index Glycemic
Ebe ọ bụ na ọkpụkpụ akụrụ ọcha na-egbochi mmetụ nke carbohydrates na ntụgharị ha ghọọ ndị na-edozi ahụ, ọ nwere ike inye ọgwụgwọ maka ọrịa shuga na hypoglycemia. Dr. Jay Udani-onye nduzi ahụike nke Medicus Research na onye edemede nke 2007 University of California na-amụ banyere Phaseolin raw ntụ ntụ (CAS 13401-40-6) - na-atụ aro na ụlọ ahụ nwere ike belata mkpịsị glycemic nke nri starchy dị ka achịcha ọcha . Site n'imebi ikike nke ahụ iji nweta glucose site na nri ndị a, Phaseolin ntụ ntụ nwere ike igbochi mkpụmkpụ na ọbara ọbara na nsogbu ndị na-akpata. Tụkwasị na nke ahụ, mmezi nke oge a nwere ike igbochi ma ọ bụ kwụsị oge mbido ụdị ọrịa shuga nke ụdị 2 na ndị nwere hypoglycemia na-arụ ọrụ (ndị na-arịa ọrịa shuga). Ọ bụ ezie na usoro ndị a dị ka ihe na-enye obi ụtọ, a chọpụtabeghị ha site na nnukwu ule.
Phaseolin ntụ ntụ, nke bụ isi mkpụrụ osisi nchekwa protein nke nkịtị, Phaseolus vulgaris L., akụkọ maka 50% nke protin protein zuru oke. Ngwakọta ngwa ngwa nke Phaseolin ntụ ntụ na mkpụrụ osisi na-amalite na-amalite banyere 14 ụbọchị mgbe okooko na-aga n'ihu maka ụfọdụ 12-14 ụbọchị dị ogologo. Otú ọ dị, ọnụ ọgụgụ na ọnụ ọgụgụ nke nnukwu Phaseolin raw powder, metụtara mgbanwe na mmalite, ogologo, njedebe, na ọnụego njikọ, egosipụtawo dị iche n'etiti genotypes. Naanị 3 Phaseolin ntụ ntụ electrophoretic, a họpụtara T, S, na C mgbe ndị cultivars Tendergreen, Sanilac, na ndị na-ese okwu, dịgasị iche, achọpụtala n'etiti ndị 100 na-azụlite ohere.
Mpempe akwụkwọ dị mgbagwoju anya nke mpempe akwụkwọ dị iche iche na ihe ndị dị mma nke protein 14 protein polypeptides nke Phaseolin ntụ ntụ, yana homology dị na peptide nkewa, na-atụ aro na Phaseolin raw ntụ ntụ polypeptides bụ protein ndị yiri ya. Dabere na nsonazụ ndị crosses n'etiti cultivars nwere ụkpụrụ atọ nke electrophoretic, mkpụrụ ndụ ihe nketa nke na-achịkwa polypeptides nke nke ọ bụla n'ime Phaseolin raw ntụ ntụ na-egosi na enwere njikọ chiri anya, ketara na ngọngọ na alleles bụ codominant. Nnukwu mgbanwe dị na Phaseolin ntụ ntụ, nke dabeere na atụmatụ site na iji mgbagwoju immunoelectrophoresis, a chọtara n'etiti anụ bean. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị mmadụ dị iche iche na-egosi nkesa na-aga n'ihu na ihe nketa dị iche iche, ụfọdụ azụzụ azụ azụ azụ na-eme ka ọganihu Phaseolin raw ntụ ntụ pụta na-ebu mkpụrụ ndụ ole na ole nwere mmetụta dị ukwuu. A na-amata otu mkpụrụ ndụ ihe nketa nke na-ebelata ọnụ ọgụgụ Phaseolin na-erughị ọkara nke ọkwa nkịtị n'oge na-adịbeghị anya na anụ ọhịa P. vulgaris.
Phaseolin ntụ ntụ Powder Powder (CAS 13401-40-6)
Raw Phaseolin ntụ ntụ Marketing
Otu esi azụta Phaseolin ntụ ntụ (CAS 13401-40-6) sitere na AASraw
Phaseolin ntụ ntụ ntụ ntụ ntụ ntụ ntụ
Flumethasone acid ntụ ntụ (28416-82-2)